Soo dejisan Mp3tag 3.02 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Mp3tag
Mp3tag – a editor tag haboon files audio leh qaababka badan oo waxtar leh. Software The kuu ogolaanayaa inaad tags qaabab sida MP3, AAC, MP4 saxaa, MPEG-4, WMA, ALAC, daanyeer, FLAC iwm Mp3tag u saamaxaaya in ay si toos ah u hesho macluumaadka file faahfaahsan oo internetka ka isticmaalaya database freedb online iyo Amazon. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan oo saxaa Playlists ee Winamp ama Windows Media Player. MP3tag u saamaxaaya in ay xamili files music in hab hal ama Dufcaddii oo fudud ah si ay u isticmaalaan interface.
Haboon editor tag
Muujiya macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan file ah
Abuuritaanka iyo sixiddiisa of Playlists
Soo dejisan Mp3tag
Faallo ku saabsan Mp3tag
Mp3tag Xirfadaha la xiriira
Ciyaaryahanka MFT in loo maqli karo audio iyo video files leh taageero u qaabab casri ah oo aan baahida loo qabo in download codecs dheeraad ah.
GOM Media Player – media player caan ah oo leh astaamaha horumarsan ee dejinta. Softiweerku wuxuu taageeraa qaabab hoosaadyo badan oo hoosta ka xaruumaa wuxuuna ka helaa codeynta ka maqan internetka.
Barnaamijkani wuxuu ka hortagaa hanjabaadaha internetka ee ugu caansan iyo xannibaadyada aan la ogolayn ee isku xirka kombiyuutarka iyadoo loo marayo internetka.
Aaladda si loogu badalo faylasha qaabka PDF. Software ka kooban yahay tiro balaadhan oo ah qalab si weyn loo ballaariyo fursadaha shaqada la PDF files.
Modio – waa qalab lagula ciyaaro ciyaaraha ka socda Hbox 360 console ciyaarta. Modio wuxuu kuu oggolaanayaa inaad tafatiriso faylasha oo aad uhesho kaydinta xogta ciyaaraha ku keydsan adduunka.